गुल्मीमा अचम्म भो ! ६६ बर्षका वृद्धली २७ वर्षे युवती टप्काए… युबतिको काहनी अझै रमाइलो …पूरा हेर्नुहोस::आर एम खबर
गुल्मी– एक छोरी, तीन जिल्लाकी बुहारी !उमेर मात्रै २७ । तर विवाह ६ पटक ।पत्ताउन गाह्रो भयो होला ? तर साँचो हो, घटना । २७ वर्षको उमेरकी युवतीले छैठाँै विवाह जोसँग गरिन्, त्यो अझ अनौठो छ । उनले ६६ वर्षका वृद्धासँग विवाह गरिन् ।अनौठो लाग्ने यो घटना गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्ला दुवानेटको हो । घटनाकी प्रमुख पात्र ती महिला (छैठौँ पटक विवाह गर्ने ) भने भिडियोमा बोल्न चाहिनन् ।तर उनका ६६ वर्षीया जीवनसाथी ढालबहादुर घिमिरे भने खुलेरै बोले ।
केही दिनअघि लौरो टेक्दै धुर्कोट गाउँपालिकाको तेस्रो चौैमासिकको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पुगेका ढालबहादुरले भने– ‘मेरी श्रीमतीको मृत्यु भएको ६ वर्ष भयो । त्यसयता एक्लै खाना पकाएर खाँदा असाध्यै दुःख भएको थियो ।’‘यो भर्खरकी केटीले मलाई पत्याउली भनेर विश्वास लागेकै थिएन’, उनीहरूबीचको सम्बन्धको रहस्यको गाँठो फुकाउँदै उनले सुनाए, ‘एक दिन एउटी महिलासँग त्यसका बारेमा सोधपुछ गरेँ । विस्तारै उसँग नजिक भएँ । उसले मनपेट खोली, हाम्रो मन मिल्यो र ब्या (विवाह) गरेका हौँ ।’ढालबहादुर भन्छन्, ‘३ छोरी ५ छोरासहित ८ सन्तानको बाबु हुँ म । खानदान पनि कम होइन । जिजुबाजेको शेषपछि जिम्वाल चलाएको मान्छे हुँ तर त्यो सम्पत्ति र त्यतिका छोराछोरी हुँदा पनि एक्लो र निरासिलो महसुस हुँदोरहेछ । बुढेसकालमा स्याहरसुसार गर्ली भनेर विवाह गरेको हुँ । नभन्दै राम्रै स्यहारसुसार र माया प्रेम दिएकी छ ।’
त्यहीबीचमा ‘जूनको र ताराको, बल्लै भेट भयो दुवै कर्म हाराको…’ गीत सुनाउँदै उनले भने– ‘उनले गुल्मीकै चार ठाउँमा विवाह गरिन् ।’विस्तारमा उनले सुनाए– ‘गोरखामा पनि विवाह गरेर गइन् । त्यसपछि प्युठानका एक जनाले विवाह गरेर लगेको ५ दिनमै माइतीघर ल्याएर छोडेछ । अन्यत्रै ५ सहित म उनको छैठौँ श्रीमान हुँ । उनका दुई छोराहरू छन् । मेरा ३ छोरी र ५ छोराहरूले पनि एक्लै पारेका थिए । कर्मले म पनि एक्लै, उनी पनि एक्लै परेपछि हामीलाई संजोगले जुराएको जस्तो लाग्छ ।’
‘शिशुको चाहना छ कि ? भन्ने प्रश्नमा ढालबहादुर भने– ‘खै हेरम, त्यो भने यसै भन्न सकिन्न । उनले मेरा पनि दुई छोराहरू छन् । तपाईंका पनि पाँचवटा छोराहरू छन् । अब किन चाहियो र अरू सन्तान ? सन्तान भएर पो के हुँदो रहेछ र ?’ढालबहादुरले कुराकानीकै क्रममा थपे– ‘अरू हाम्रो मेलमिलाप राम्रै चलेको छ । मैले वृद्धभत्ता चाँडै खान्थेँ होला तर नागरिकतामा मेरो उमेर घटाई दिएका छन् तर म ६६ वर्षको भएँ ।’उनीसँगै आएका एक जना वृद्धले भने– ‘ऊ मेरो एक महिना कान्छो भाइ हो । हाम्रो उमेर ६६ वर्षको भयो । ऊ अहिले विवाह गरेर सुखी भएकाले हामी खुशी छौँ, श्रीमतीको खाँचो बुढेसकालमा हुँदो रहेछ ।’ धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष हिमप्रसाद पन्थीले दुवैको घरवार पहिले बिग्रेको र अहिले सुधार भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।